Daawada paracetamol Oo Sababi Karta Wadne Xanuun - Daryeel Magazine
Daawada paracetamol Oo Sababi Karta Wadne Xanuun
Qabatinka amma cunista joogta ah ee daawada xannuun baabiiyaha la ah ee Paracetamol la yidhaa, ayaa la ogaaday in ay kor u qaado khatarta wadno xannuunka iyio faaliga.
Daraasad aad u miisaan culus oo khubaro Ingiriiska u dhalatay maanta ku dhawaaqeen, ayaa ay ku sheegeen in bukaannada loo qoray daawadan xannuun baabiiyaha ah ee sida joogta u cuna in ay 63% u dhintaan wadno xannuun.
Khubaradan waxay daraasadooda ku sheegeen in daawadan kor u qaado fursada uu qofku ku yeelan karo wadno xannuun, kuna soo asiibi karo faaliga amma wax-qalalka, iyagoo ku tilmaamay in 68% halis qofka daawadan cuna ugu jiro xannuunadas halka in ka badan 50% ay ku dhacaan boog calooleedka amma dhiigga obacda kaga furma.
Cilmi baadhayaasha oo daraasadooda ku baadhan in ka badan 666,000 bukaan ah, ayaa ay ka soo muuqatay xaalad aad u daran oo daawadan ku lammaan, kadbi markii ay ogaadeen in dadkan wadno xannuun ay ku sababtay daawo xannuun baabiiyaha amma Paracetamol muddo ay qadanaayeen.
Natiijada daraasda ka soo baxday waxay ku talisay in dib-u-eegis lagu sameeyo daawadan, sababtoo ah waxay sheegeen in ay Paracatemol ka hor tagto in dheecaanada jidhku sidooda u shaqeeyaa.
Saynisyahannadan oo dib-u-eegis ku sameeyey 8 cilmi-baadhisood oo laga qaaday bukaan si joogto ah u isticmaali jiray daawada Paracetamol muddo 14 sannadood ah, ayaa lagu arkay in ay qabeen xannuuno ay ka mid yihiin wadno xannuun, dhabar xannuun iyo waliba faalig.
“Waxa aan ka welwelsanahay daawada Paracetamol qofka aadka u qaata muddo badan in uu ka dhaxli doono xannuuno aad u darran, gaar ahaan muruqyada iyo lafuhu xannuunaan, kadibna wadnuhu xannuuno,” ayuu yidhi Philip Conaghan oo cilmi-baadhistan hoggaaminayey.
FAYTAMIIN C: Muhiimadda Uu U Leeyahay Wadnaha Iyo Caafimaadka Qofka Daawada Dabiiciga ah ee Madax Xanuunka Faaidooyinka Faytamiin D-ga Iyo Khatarta Ka Dhalan Karta Hadii Uu Jidhku Waayo Faaidada Beytaraafku U Leeyahay Dadka Qaba Dhiig-karka Iyo Wadne Xanuunka